Nhau - Mhando dzeFomu Yenzvimbo dzeKongiri Zvimiro 9-8
Mhando dzeFormwork Yezve Concrete Structures 9-8
Zvekuvakisa kongiri, yeayo akasarudzika ehupfumi anoshandiswa zvakanyanya kugadzira chivakwa chinhu. Inofanirwa kudururwa muforoma yakanyatsogadzirwa, iyo inonzi formwork kana shuttering.
Fomu rinobata kongiri yakadirwa muchimiro kusvikira yaomesa uye kuwana simba rakaringana rekuzvitsigira nekugadzirisa uremu hwezvinhu. Mafomu anogona kuverengerwa munzira dzakawanda:
Mafomu ane basa rakakosha mukuvakwa kwekongiri. Inofanira kunge iine simba rakaringana kutakura iyo yese mitoro iripo panguva yekukanda mashandiro, uye inofanira kubva yabata chimiro chayo apo kongiri ichiomarara.
Ndezvipi Ndezvipi Zvinodiwa paGwaro Rakanaka?
Kunyangwe paine akawanda mafomu mafomu zvinhu, anotevera akajairwa mashandiro maficha kusangana nezvinodiwa zvekuvakwa kwekongiri:
Inokwanisa kutakura zvinhu zvinorema.
chengetedza chimiro chayo nezvitsigiso zvakakwana.
Concrete haina kukuvara kana uchibvisa mafomu.
Zvinyorwa zvinogona kushandiswazve uye zvishandiswezve mushure mehupenyu hwakareba.
Iyo formwork zvinhu hazvifanire kumona kana kukanganisa.
Mhando dze formwork nezvinhu:
Matanda formwork yaive imwe yemhando yekutanga formwork yakamboshandiswa. Iyo yakaungana pane saiti uye ndiyo mhando inochinjika, inogadziriswa zviri nyore. Kubatsira Kwayo:
Nyore kugadzira uye kubvisa
Yakareruka, kunyanya kana ichienzaniswa nesimbi formwork
Inoshanda, ichibvumira chero chimiro, saizi uye kukwirira kwechimiro chekongiri
Mari mune zvidiki zvirongwa
Inotendera kushandiswa kwematanda emuno
Nekudaro, zvakare zvakare iine zvikanganiso:ine hupenyu hupfupi uye inotora nguva muzvirongwa zvikuru. Kazhinji, matanda formwork inokurudzirwa kana mari yevashandi yakaderera, kana kana zvikamu zvakaoma zvekongiri zvichida fomu inochinja, chivakwa chekuvaka hachidzokororwe zvakanyanya.
Plywood inowanzo shandiswa nematanda. Icho chinhu chakagadzirwa chehuni, icho chinowanikwa mune akasiyana saizi uye ukobvu. Mune mafomu ekushandisa, anonyanya kushandiswa kukamatira, kushongedza uye fomu linings.
Plywood formwork ine zvakafanana zvivakwa sematanda formwork, kusanganisira simba, kugadzikana uye kusareruka.
Metallic Fomu: Simbi neAluminium
Simbi formwork iri kuramba ichizivikanwa nekuda kwehupenyu hwayo hwakareba hwebasa uye akawanda mashandisirwo. Kunyangwe ichidhura, simbi formwork inobatsira mapurojekiti mazhinji, uye iri sarudzo inoshanda kana mikana yakawanda yekushandisa zvakare iri kutarisirwa.
Izvi zvinotevera zvimwe zvezvinhu zvikuru zvesimbi formwork:
Yakasimba uye yakasimba, ine hupenyu hwakareba
Inogadzira kupera kwakatsetseka pane kongiri nzvimbo
Inoderedza huchi hwehuchi mukongiri
Yakagadziriswa uye yakabviswa
Inokodzera zvivakwa zvakakombama
Aluminium formwork yakafanana chaizvo nesimbi formwork. Musiyano mukuru ndewekuti aluminium ine diki yakadzika kupfuura simbi, izvo zvinoita kuti formwork ive yakareruka. Aluminium zvakare ine simba rakaderera pane simbi, uye izvi zvinofanirwa kutarisirwa usati waishandisa.
Rudzi urwu rwefomu rinounganidzwa kubva panopindirana mapaneru kana modular masisitimu, akagadzirwa akareruka uye akasimba epurasitiki. Mapepa epurasitiki anoshanda zvakanyanya muzvirongwa zvidiki zvine mabasa anodzokororwa, akadai sedzimba dzinodhura dzimba.
Mapepa epurasitiki akareruka uye anogona kucheneswa nemvura, nepo ichikodzera zvikamu zvakakura uye kushandiswazve kwakawanda. Kukosha kwayo kukuru kuve nekushomeka kushoma pane matanda, sezvo zvinhu zvakawanda zvakagadzirwa.
Kupatsanura Formwork Kubva pane Yakaumbwa Zvimiro
Kuwedzera pakuiswa muzvinhu, mafomu anogona zvakare kuiswa muzvinhu zvinovakwa.
Ese mafomu mafomu akagadzirwa zvinoenderana nehurongwa hwavanotsigira, uye zvirongwa zvinoenderana zvekuvaka zvinotsanangudza zvinhu uye ukobvu hunodiwa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mafomu ekuvaka anotora nguva, uye inogona kumiririra pakati pe makumi maviri neshanu muzana yemitengo yezvivakwa. Kudzikamisa mutengo wemafomu, tarisa zvinotevera zvinokurudzirwa:
Zvirongwa zvekuvaka zvinofanirwa kushandisa zvekare zvivakwa uye mageometri zvakanyanya sezvinobvira kubvumidza fomu kuti ishandiswe zvakare.
Kana uchishanda nemapuranga formwork, inofanirwa kutemwa kuita zvidimbu zvakakura zvakakwana kuti zvishandiswe zvakare.
Concrete zvimiro zvinosiyana mukugadzirwa uye chinangwa. Kufanana nesarudzo zhinji dzeprojekti, hapana sarudzo iri nani kupfuura iyo yese kune ese maapplication; mafomu akakosha kwazvo eprojekiti yako anosiyana zvichienderana nekugadzirwa kwekuvaka.
Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo, Metal Cuplock Scaffolding, Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Ringlock Scaffolding Zvikamu,